मैदानमा आफ्नै टिमका ब्याट्सम्यानले खुशी मनाइरहँदा ड्रेसिङ रुममा कप्तान निराश ! – Everest Dainik
मैदानमा आफ्नै टिमका ब्याट्सम्यानले खुशी मनाइरहँदा ड्रेसिङ रुममा कप्तान निराश !
ड्रेसिङ रुमबाटै कप्तान स्मिथले चिच्याएर मिशेललाई अर्को रन पुरा गर्न भने । त्यसपछि बल्ल मिशेल आफ्नो रन पुरा गर्न दौडिए । अन्ततः उनले रन पुरा गर्दै आफ्नो नाममा शतक लेखाए । पछि मार्श दाजुभाई आफूहरुको बेवकुफीप्रति हाँसिरहेका देखिन्थे ।